Mandehana Green: Fomba 5 hampiatoana ny fampiasana CD sy DVD | Martech Zone
Mandehana Green: Fomba 5 hampiatoana ny fampiasana CD sy DVD
Alatsinainy, Aogositra 25, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Araka ny EPA, 5.5 tapitrisa CD, fonosana ary CD mozika hafa an-tapitrisany no atsipy isan-taona nefa tsy haverina. Ny CD sy DVD dia vita amin'ny aliminioma, volamena, loko, fitaovana maro samihafa - fa ny ankamaroan'ny Polycarbonate sy Lacquer. Ny polycarbonate sy ny Lacquer dia novokarina mivantana avy amin'ny solika.
Mitohy ny statistika, volana isam-bolana 100,000 XNUMX pounds ny CD sy DVD lasa lany andro ihany koa. Tsy misy koa fomba mahomby hanodinana ireo fitaovana! Araka ny Indostrian'ny solika ny tenany, manodidina ny 1.1 litatra isaky ny barila (42 litatra) ny menaka mankany amin'ny petrochemicals.
Heveriko fa mandeha tsy misy fitenenana, avy eo, ny fifandimbiasana amin'ny computing cloud mpizara virtoaly ary ny fisoratana anarana amin'ny lozisialy ho fampiharana fampiharana dia afaka manampy ny tontolo iainana. Tsy azoko antoka hoe firy isan-jaton'ny barika iray amin'ny diloilo no mamorona kapila madinidinika, saingy azo antoka fa afaka mahomby kokoa isika amin'ny alàlan'ny fampiasana USB drive sy tambajotra ho an'ny fizarana rakitra fa tsy handoro kapila.
Ankoatry ny mampiasa ireo kapila, tsy azoko atao ny mieritreritra fa misy angovo be dia be ampiasaina tsy ilaina amin'ny famokarana sy fitaterana ireo kapila ireo. Azo antoka fa ny fantsom-panafahana fantsom-pifandraisana plastika dia hisy valiny tsara ho an'ny olombelona, ​​sa tsy izany? Tsapako fa misy zavatra maro hafa mitana andraikitra lehibe kokoa izany, fa maninona no tsy misy miresaka an'ity indostria tsy ilaina ity?
Manontany tena aho hoe maninona no mampiasa Software toy ny Service dia tsy singa fototra Maitso mandeha manoro hevitra amin'ny orinasa? Hard drive Terabyte, USB drive, Online Backups… ireo rehetra ireo dia mora azon'ny rehetra ampiasaina. Tsy tokony hisy hividy CD sy DVD intsony. Tsy manofa sarimihetsika intsony amin'ny DVD aho, manofa azy amin'ny ahy Apple TV!
Hevitra 5 hanakanana anao amin'ny fiankinan-doha amin'ny CD
Miova amin'ny lozisialy ho serivisy. Ohatra: Dump Microsoft Office ho an'ny Google Apps ary Microsoft CRM ho an'ny Salesforce. Tsy misy fametrahana, tsy misy backup, tsy misy fitaovana… browser fotsiny!
Mifamadiha amin'ny fanofana DVD sy fividianana CD mozika ho fisintomana ny fividianana mozika na Rentals Movie amin'ny iTunes, AppleTV ary tolotra premium hafa. Mety mila mieritreritra ny sary famantarana azy ireo ny iTunes!
Mivadika amin'ny famerenana sy fitaterana angona amin'ny CD sy DVD mankany amin'ny USB Drives. Ny kapila USB dia mitazona angona bebe kokoa ary mora entina, haingana kokoa ary tsy reraka. (Mitandrema ihany fa tsy ny mpamily USB rehetra dia noforonina mitovy!) Vidio ny kapila finday lehibe ho anao hanohanana ny asanao ary hitaterana azy hiverina hiasa. Tsy mandeha mankaiza aho raha tsy misy ny ahy Pasipaoro niomerika tandrefana, io no fampiasam-bola tsara indrindra nataoko!
Alefaso ireo rakitra lehibe amin'ny orinasa hafa amin'ny alàlan'ny mpivarotra SaaS an-tserasera drop send, YouSendIt, SendThisFile, MailBigFile, ary SendSpace.
Ario ny kapila CD sy DVD anao. Rehefa manafatra ny solosaina findainao manaraka ianao dia aza asiana iray amin'ilay fividianana. Rehefa manafatra azy ireo any amin'ny biraonao ianao dia manangona vola kely ary mividiana kapila USB fa tsy manavao ny mpanoratra DVD anao. Raha tsy azonao alefa izy ireo dia tsy ho may ianao ka handoro an'io CD manaraka io!
Raha ny marina, ny hany antony anaovako CD intsony dia ny amin'ny boky amin'ny CD na handoro mozika ho an'ny fiara mankany sy any am-piasana. Izaho dia nijery vidiny, na izany aza, ary afaka mahazo stereo fiara fanoloana izay misy fampiasa USB ary koa fanaraha-maso iPod latsaky ny $ 200! Angamba izao no fotoana tokony hataoko!
Google Adsense Mividy vola amin'ny sakafoko izao
28 Aogositra 2008 à 1:07
Tsy tsapako fa tena mampiasa CD sy DVD isika rehetra raha tsy namaky ny lahatsoratrao. Na dia afaka milaza amim-pireharehana aza aho fa efa manao ny #s 1, 3 ary 4 ao amin'ny lisitrao!